Public Health in Myanmar: Hangover
မင်္ဂလာရှိသော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေ။ နှစ်သစ်မှာ ပထမဦးဆုံးတင်တဲ့ ပို့စ်ကို ပထမဦးဆုံး မှတ်ချက်ပေးရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အချိန်ကိုက်တင်လိုက်တဲ့ပို့စ်လေးပဲ။ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ လူအတော်များများ ဖြစ်နေကြတဲ့ ရောဂါတွေက အနေအထိုင် အစားအသာက်မှာ ပုံမှန်မဟုတ်လို့ ဖြစ်ရတာ ပိုများလို့ မွန်းသက်ပန်တင်တဲ့ ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ပြီး ကာကွယ်ရမယ်ဆိုတဲ့ ဒီပို့စ်နဲ့ ယခင်ပို့စ်တွေအားလုံးကလည်း စာဖတ်သူတွေအတွက် သိပ်အကျိုးရှိပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း များများတင်ပေးနိုင်ပါစေ။ အစ်မကတော့ သင်္ကြန်မှာရော နှစ်သစ်ကူးမှာပါ ပျော်ဖို့အချိန်မရလိုက်ဘူး။ Assignment တွေနဲ့ စာပိနေလို့။ Public ကို ပညာပေးတဲ့ ဒီလို ပို့စ်ကောင်းလေးတွေ များများ တင်နိုင်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလျက်
S!N S!N said...
i visited ur blog. I have read that taking paracetamol after drink can cause side effect. is it correct or not. I want to know.
အရက်ကို တစ်ခါတစ်ရံသောက်တတ်လို့ နာတာကျင်တာတွေပျောက်အောင် paracetamol တစ်လုံးလောက်သောက်လို့ရပါတယ်။ အရက်ကို နှစ်ရှည်လများ စွဲသောက်ပြီး အသည်းကျွမ်းအသည်းခြောက်နေသောသူများသာလျှင် paracetamol အများကြီးသောက်လို့မရတာပါ။ အသည်း ကျွမ်းနေတဲ့လူနာတွေတောင် paracetamol တစ်လုံးသောက်တော့ သောက်လို့ရပါတယ်။
အရက်သမားနဲ့ အရှက်မရှိသောအမျိုးသား အမျိုးသမီးများ မပါတဲ့ သင်္ကြန်တစ်ခုကို စောင့်မျှော်လျှက်....ရိုးရာသင်္ကြန်ဆိုတာ မရှိတော့ဘူး။ အရက်ပွဲတော်နဲ့ ကြက်ပွဲတော်ပဲကျန်တော့တယ်။
အာရုံကြော အားနည်းတယ်လို့ ဆရာဝန်က ပြောပါတယ်။ အာရုံကြော အားနည်းတာကို ဘာအစာတွေ စားသောက်ရမလဲ၊ ဘာဆေးတွေ သောက်ရမလဲ သိချင်ပါတယ်။
ထမင်းတော့ နေ့တိုင်း အစားများလို့ လူတောင် ဗိုက်ထွက်ပြီး ဝနေပါပြီ။ ထမင်းဝတော့ အာဟာရ ချို့တဲ့မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မထင်မိတာပါ။
ဆရာဝန်က Betex အားဆေးကို သောက်ခိုင်းပါတယ်။ တခြား ဘာတွေ ဆောင်ရရှောင်ရမလဲ သိပါရစေ။
အာရုံကြောအားကောင်းဖို့ ထမင်းကိုဖိစားနေလို့ သိပ်ပြီးထူးမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့ အသီးအရွက်တွေ၊ အရည်ရွှမ်းတဲ့ အသီးအနှံတွေ၊ အရိုးပါစားလို့ရတဲ့ငါးတွေ များများစားပေးပါ။
Ma Nge Naing.. စာတွေ ဆက်ရေးဖြစ်အောင် အားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မရေ.. အချိန်ရသလို စာတွေကြိုးစားရေးပါ့မယ်ရှင်။
အချိန်မရနိုင်လို့ ဒီဘက်ကို မရောက်ဖြစ်တဲ့ရက်တွေ များနေလို့ပါ။ မေးမြန်းသူများကို အချိန်မှီ မဖြေနိုင်ခဲ့တာတွေအတွက် တောင်းပန်ပါတယ်ရှင်။